Din njanji yemagetsi magetsi metres Vagadziri - China Din njanji elektroniki magetsi emamita Suppliers, Fekitori
3PHASE 4WIRE ENERGY METER (IC kadhi)
3 phase 4 waya prepaid simba metres (IC kadhi) chitsva chesimba chiyero chechigadzirwa chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu zvinoenderana nehunyanzvi hwenyaya dze GB / T17215.321-2008 uye GB / T17215.323-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Imwe-chikamu din njanji magetsi emagetsi metres (inoshanda) chinhu chitsva chesimba chiyero chakagadziridzwa uye chakagadzirwa nekambani yedu sekuenderana nehunyanzvi hwekutsanangurwa kwe GB / T17215.321-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Imwe-chikamu din njanji yemagetsi magetsi metres (kure) chinhu chitsva chemagetsi simba rekuyera chigadzirwa chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu maererano nehunyanzvi technical ye GB / T17215.321-2008.Chino chigadzirwa chinoshandisa mahombekombe akakomberedza maseketi uye maSMT maitiro ekugadzira, ine mabasa akadai sey magetsi magetsi kuyerwa, kugadzirisa data, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Imwe Cheji DIN Rail Energy Mamita （IC kadhi)
Imwe-chikamu din njanji yemagetsi magetsi metre (IC kadhi) chitsva chemagetsi simba rekuyera chigadzirwa chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu maererano nehunyanzvi hwekugadziriswa kwe GB / T17215.321-2008.Chino chigadzirwa chinoshandisa mahombekombe akakomberedza maseketi uye maSMT maitiro ekugadzira. , ine mabasa akadai sey magetsi magetsi kuyerwa, kugadzirisa kwedata, chaiyo-nguva yekutarisisa, uye kudyidzana kweruzivo.
Imwe Cheji DIN Rail Energy Meter （dormitory）
Imwe-chikamu din njanji magetsi emagetsi metres (dormitory) chitsva chemagetsi simba rekuyera chigadzirwa chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu maererano nehunyanzvi hunyanzvi hwe GB / T17215.321-2008.Chino chigadzirwa chinoshandisa mahombekombe akakomberedza maseketi uye maSMT maitiro ekugadzira, ine mabasa akadai sey magetsi magetsi kuyerwa, kugadzirisa data, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
3PHASE 4WIRE ENERGY METER (kure)
3 chikamu 4 waya magetsi metres (kure) chinhu chitsva chesimba chiyero chakagadziriswa uye chakagadzirwa nekambani yedu zvinoenderana nehunyanzvi hwekugadziriswa kwe GB / T17215.321-2008 uye GB / T17215.323-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.